Ushizi iwumkhiqizo kuhle ubudala futhi ulwazi mayelana umuntu owasungula ke, lihlukile. Othile ecabanga ukuthi ushizi waqala ukukhiqiza e-Afrika. Ngokusho yetinsita a ongumArabhu, ngokuthatha ubisi, waqhubeka nohambo olude. Ngemva kohambo olude, wanquma ukuba baphuze ubisi, kodwa esiswini semvu wathola ihlule kuphela. Kwakujabulisa ukunambitheka, kwathi selinambithile, Nomad ukutshelwa akuthola omakhelwane. Ngokushesha mayelana le ndlela yokwenza ushizi wayaziwa izizwe eziningi ayimizulane. Ngokusho kwenye inguqulo, kukhona la ushizi yaziwa kusukela ezinsukwini lapho abantu bafunda mayelana ubisi. Manje ushizi zithandwa futhi Irreplaceable yobisi umkhiqizo. Futhi kunotsa kwekwehlukana zinhlobo nezinhlobonhlobo ushizi: ke iphekwe, ushizi, kanzima, elithambile, sikhuntile, nabanye abaningi. Abenzi kuphela kungenziwa kahle ukusika on ipuleti, kodwa futhi wengeza ukulungiswa izitsha, okwenza kube okumnandi kakhudlwana futhi yasekuqaleni, kanye nokulungisa ukudla okulula ushizi, zokupheka manje ezihlukahlukene enkulu yonke ukunambitheka.
Ushizi appetizer kuvamile impela etafuleni iholide. Ilungiselela ke, ngaphandle kokuchitha isikhathi, sicela kuwe futhi kusimangaze izivakashi zakho. Futhi, ushizi Ungadla ukubukeka elikhanyayo futhi yoqobo ipuleti nje okwanele ukuze ubonise umcabango. Ushizi behlezi kahle ukunambitheka ngemikhiqizo eminingi, ngakho-ke ushizi Ungadla izitsha abandayo Amatebhe, njengoba beze ngaphansi ezihlukahlukene okudaliwe Culinary. Ngokwesibonelo, ushizi Ungadla nge garlic, okuyinto has a iphunga elimnandi futhi nokucija. Kodwa inzuzo yayo esemqoka ukuthi ulungiselela imikhiqizo etholakala etholakala efrijini umkhaya ngamunye. Ukuze silungiselele lokhu dish uzodinga:
400 amagremu ushizi othambile, okungcono tho (grade ukhethe ukunambitheka yakho).
Amaqanda - 2-3 izicucu.
ugarliki - 2-3 izingcezu,
kweqembu anyanisi oluhlaza, parsley, dill.
imayonnaise (unga ekhaya) - 2-3 tbsp. spoon.
Okokuqala udinga ubilise amaqanda kanzima abilisiwe, kuphole zibayise futhi bahlanza. On a grater emihle grate amaqanda noshizi. Faka isibambo usebenzisa cindezela garlic, lemali kunqunywa ngayinye ukunambitheka yakho. I isaladi okuholela nge imayonnaise noma ukhilimu omuncu, pepper, usawoti, fake nquma bese wengeza amakhambi fresh, uhlanganise kahle. Ushizi Ungadla zibekwe phezu esinkwa esinsundu, ungase futhi ugcwalise obhasikidi yokuhlola noma ezingenashukela utamatisi neengcezu, noma ukwenza amabhola amancane, imifino bewahlobisa, wagqoka ipuleti. Umthamo ulungile! Ukupheka ushizi appetizer nge garlic kuthatha imizuzu engaphansi kwengu amabili, futhi ibalwa ngo-eziyisithupha servings.
Dish, iresiphi zazo ilula kakhulu ukulungiselela, kodwa kunobuciko ehlukile. Lokhu ushizi appetizer "Raffaello". Ukuze ekuwulungiseleleni kuyadingeka:
ushizi kusetshenzwe - 2-3sht.
ambalwa clove sikagalikhi.
Ukupakisha crab izinti.
amaqanda abilisiwe - 2 izicucu.
imayonnaise noma ukhilimu omuncu - 3 tbsp.
Udinga ukuba uwuhlikihle kwi amaqanda naphakathi grater noshizi, usebenzisa cindezela ukumpintsha out clove garlic, engeza usawoti, pepper kanye imayonnaise. Uma ukupheka isidlo amaqembu zezingane, esikhundleni imayonnaise zingabekwa ukhilimu omuncu. Zonke kahle exubile. Ngo ehlukile isitsha grate crab izinti. Kusukela mass etholwe kuyadingeka ukuze Roll amabhola yobukhulu amancane phakathi bead ngamunye esabekwa inhlamvu a ziyadliwa. I ubuhlalu okuholela kumele Roll crab izinti, wagqoka ipuleti, bese efakwa imbala amahora amabili. Lapho isidlo itafula ehlotshiswe imifino kanye nemifino.
Lesi sidlo ushizi "Raffaello" ngaphezu walnuts, ungakwazi ukufaka alimondi, iminqumo noma iminqumo, engeza amakhambi oqoshiwe, izinongo.
Ujabulele ukudla kwakho ngokudla lezi izibiliboco, ngoba appetizer ushizi - uju kweqiniso!